Wasiiradii Riyaale u xushay wada hadalada oo xalay gudoomiye Cirro u cadeeyay mowqifka rasmiga ah ee xukuumada | WWW.SOMALILAND.NO
Wasiiradii Riyaale u xushay wada hadalada oo xalay gudoomiye Cirro u cadeeyay mowqifka rasmiga ah ee xukuumada
Posted on Abriil 27, 2008 by weriye1
“Mudane guddoomiye, waxaanu kaaga mahadcelinaynaa hawsha culus ee aad isu xilqaantay, waxaanu rajaynaynaa in hawshaas illaahay kuu fududeeyo. Waxaanu kuu balan qaadaynaa si niyad sami ah in aanu gacan kuugu siino sidii hawshaasu ugu dhammaan lahayd sida danta umaddu ku jirto”.
Hargeysa(sl.no) 27 Apr.2008 – Toddoba Wasiir oo ah ragga uu Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin u xushay wada hadalada hordhaca ah ee uu guddoomiyaha Golaha Wakiilada Md. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilalahi (Cirro) xalka ugu raadinayo khilaafka ka dhex oogan xukuumadda iyo xisbiyada Mucaaradka, ayaa xalay qoraal rasmi ah oo ay ku cadeeyeen mawqifka xukuumadda ee khilaafaadka taagan u gudbiyay Guddoomiye Cirro.
Qoraalkan oo aan saxaafadda loo gudbin, balse uu nuqul ka mid ah helay Wargeyska Geeska Afrika, waxa uu ka koobnaa saddex bog, waxaanay xubnaha wasiirada ahi kaga jawaabayeen aragtida sharciyeed ee ay xukuumadu ka qabto laba qodob oo kala ah muddo kordhitna Golaha Guurtidu u samaysay Madaxweynaha iyo ku xigeenka iyo cayimaadda wakhtiga doorashada ee Madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka.
Qoraalkan wasiiradu Guddoomiye Cirro u gudbiyeen oo jawaab u ah mawqifka xisbiyada Mucaaradku ka taaganyihiin labadaas qodob oo uu guddoomiye Cirro wasiiradan hore ugu gudbiyay, waxa uu isaga oo dhammaystiran u qornaa sidan:
“Mudane guddoomiye, waxaanu kaaga mahadcelinaynaa hawsha culus ee aad isu xilqaantay, waxaanu rajaynaynaa in hawshaas illaahay kuu fududeeyo. Waxaanu kuu balan qaadaynaa si niyad sami ah in aanu gacan kuugu siino sidii hawshaasu ugu dhammaan lahayd sida danta umaddu ku jirto.
Mudane guddoomiye, waxaanu hoos ku cadaynaynaa aragtida xukuumaddu ka qabto muranka taagan iyadoo mar walba tixgelinaysa dastuurka iyo xeerarka dalka u yaala, kuwaas oo mar walba laf dhabar u ah nabadgelyada iyo horumarinta dalka.
Haddaba, mudane guddoomiye, doodaha labada xisbi mucaarad waxay ku salaysanyihiin muddo kordhinta guurtida ee Madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka, iyo cayimaadda wakhtiga doorashada Madaxweynaha iyo ku xigeenka, markaas aragtida sharci ee xukuumadda ee ku waajahan labadaas qodob, waxay yihiin sidan hoos ku xusan:
1. Muddo kordhinta golaha guurtidu waa arrin ay sababtay doorashadii oo wakhtigeedii ku qabsoomi weyday sababo jira awgeed oo aynu wada ogsoonahay, arrintani maaha markii ugu horaysay oo waxa ka horeeyay laba korodhsiimo oo hore oo ahaa Madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka, kalana ahaa 24/02/2002 ilaa 24/02/2003 ahaydna wakhtigii Marxuum Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal, sida ku cad go’aanka nambarkiisu ahaa GG/GSL/KAL-fadhi 16/Go’aan-3/1/2002 ee taariikhdiisuna ahayd 12 January 2002, taas oo aad ka heli kartid arkiifiyada golaha wakiilada, muddo kordhinta kale waxay ahayd 23/2/2003 ilaa 15/5/2003, ahaydna wakhtiga Madaxweynaha Daahir Rayaale Kaahin sida ku cad go’aanka nambarkiisu yahay GG/GSL/Kal-fadhi 19aad/GO3/1/2003, taariikhdiisuna ahayd 18/01/2003 oo isna aad ka heli kartid arkiifiyada Golaha Wakiilada.
Muddada korodhsiimada ee Madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ee hadda waxay la mid tahay kuwaas hore ee leh tixraac-dhacdooyin hore (Precedent).
Waxaanay dhammaantoodba waafaqsanyihiin distoorka dalka, qodobkiisa 83aad. Faqradiisa 5aad oo ku waajahan golaha guurtida inuu qaato waajibaad distooriya, marka ay dhacdo in dib u dhaco ku yimaado doorashada Madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa.
2. Cayimadda maalinta doorashada Madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenkiisa waxa iska leh koomishanka doorashooyinka qaranka, iyagoo raacaya qodobka 8aad ee xeerka doorashada ee nambarkiisu yahay 20 ee soo baxay 2001 oo u dhigan sidan: “Koomishanka ayaa cayimaya taariikhda la qabanayo doorashooyinka si waafaqsan distoorka, waxaanay ku soo bixi doontaa digreeto madaxweyne.”
Waafaqsanaantaas distoorka ee ku sheegan qodobkaasi waxa cadaynaya oo loo cuskanayaa qodobka 83aad, faqradiisa labaad oo u dhigan sidan soo socota: “Doorashada Madaxweynaha iyo ku xigeenka madaxweynaha oo isku mar loo codaynayo, kuna salaysan habka u codaynta liistada waxa la qaban doonaa bil ka hor dhammaadka mudada madaxweynaha hore.”
Go’aanka golaha guurtidu kama muuqato cayimid maalinta doorashada, balse waxay ku sheegeen go’aankooda sidan: “Doorashada Madaxweynaha ku xigeenka Madaxweynaha waxa la qaban doonaa bil ka hor dhammaadka mudada xilka sida ku cad qodobka 83aad, faqradiisa labaad ee Distoorka Jamhuuriyadda Somaliland.”
Guurtidu kamay dhawaaqin hawadda, waxaan sharci ahayna may sheegin.
3. Koomishanku wuxuu xaq u leeyahay inuu muddo qabashada doorashooyinka sameeyo, ka dib marka loo helo korodhsiimo sharciyeed oo waafaqsan distoorka, kuna cad qodobka 8aad ee xeerka doorashooyinka dawladaha hoose iyo madaxtooyada. Haddii aan korodhsiimo dhicin, maamulkii dawliga ahaana meesha ka baxo yaa tartan loo qabanayaa? yaase qabanaya oo socodsiinaya hawlihii qaranka.
4. Jadwalka wakhtiyaysan ee ay soo jideeyeen koomishanka doorashooyinka qaranku iyagoo la soo tashaday xisbiyada, kuma salaysnayn sharciyad iyo Dastuur toona, waxa loo baahanyahay oo keliya in koomishanka qaranku cadeeyaan dib u dhaca doorasho inay timid oo aanay qaban karayn wakhtigii loogu tallo galay siday horeba u samayn jireen.
Si kastaba ha ahaate waxay sameeyeen jaangooyn ay ku qorsheeyeen hawlahooda. Haddaba, iyadoo qorshahaas la tixgeliyay aan sharciyadda waafaqsanayn ayaa golaha guurtidu doorashada hore ee dawladaha hoose ay ku asteeyeen 6/10/2008 iyo ta ku xigta ee Madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ay u dhexeeyaan muddo dhan lix bilood, sida ku cad xeerka diiwaangelinta cod bixiyayaasha ee lambarkiisu yahay 37 ee 2007, qodobkiisa 13aad iyo 27aad.
Mudane guddoomiye, waxaanu aaminsanahay in sifaha loo maray muddo kordhintu ay waafaqsantahay dastuurka iyo xeerarka dalka u yaala, sidaas darteed annaga oo qadarinayna karaamada iyo distoorka aynu ku dhisanahay, kaasi oo u jideeyay asxaabta laftooda inay sharciyad u helaan jiritaankooda xisbinimo qaran, kana reebay ururadii kale islamarkaana fursad u siiyay u tartanka madaxtinimada dalka, waxa waajib ah in hay’ad kasta oo sharciyad ku dhisaniba ay qadariso waxay ku dhisantahay.
Mudane guddoomiye, guddiyadayadani waxay mar kastaba diyaar u tahay isku qancinta sharciyadda nagana guddoon salaam diiran oo ay ku dheehantahay tixgelin, niyad samid iyo kalgacal.
Mudane Xuseen Cali Ducaale, Wasiirka maaliyadda
Mudane Cabdillaahi Ismaaciil Cali, Wasiirka Arrimaha gudaha
Mudane Cali Ibrahim Maxamed, wasiirka qorshaynta qaranka
Mudane Siciid Sulub Maxamed, Wasiirka hawlaha guud iyo guriyaynta
Mudane Cabdi Xasan Buuni, Wasiirka xidhiidhka goleyaasha
Mudane Xasan Xaaji Maxamuud, Wasiirka waxbrashada
Mudane Cabdillaahi Maxamed Ducaale, Wasiirka Arrimaha dibadda
« WAR-SAXAAFADEED KA SOO BAXAY MADAXTOOYADA JSL War-Degdega:Rabshad Gacan ka hadal ah ayaa saaka ka bilaabantay Degmadda Axmed Dhagax ee Magaalada Hargaysa. »